Warshad baradhada macaan - Shiinaha Soosaarayaasha iyo Badeecada Macaan
Baradho macaan sidoo kale waa khudrad caan ku ah nolol maalmeedka, asxaabta qaar waxay jecel yihiin boorashka baradhada macaan ee adag inay cabaan, saameynta iyo shaqada baradhada macaan sidoo kale waa mid aad u wanaagsan, dadka qaar waxay jecel yihiin inay cunaan baradhada macaan ee la dubay.
Budada Baradhada Macaan ee Budada ah
Jidhka baradhada guduudka ahi waa guduud iyo guduud mugdi ah. Marka lagu daro nafaqooyinka baradhada macaan ee caadiga ah, sidoo kale waxay hodan ku tahay selenium iyo anthocyanins. Baradho macaan oo casaan ah ayaa caan ka ah suuqyada caalamiga ah, rajooyinkeeda horumarineedna waa kuwo aad u ballaaran. Xilliga soo-saarka baradho macaan ayaa bilaabmaya Sebtember, waqtiga sahaydu wuu kooban yahay, oo soconaya dhawr bilood oo keliya. Dhamaan budada baradhada macaan waxay ka adkaaneysaa xayiraada xilliga wax soo saarka ee baradhada macaan ee buluugga ah waxayna si weyn u ballaarineysaa wareegga wax soo saarka ee shirkadaha soo saarka cunnada baradhada macaan.